ကနောင်မင်းအား အခစားမဝင်၊ ညီလာခံတွင် မတွေ့၊ လွှတ်ရုံးတွင်လည်းမမြင်သည်ကို တောင်နန်းစံမိဖုရားကြီးက မင်းတုန်းမင်းအားမေးမြန်းရာ ဘုရင်က နေမကောင်းကြောင်းကြားသည်ဟု အဖြေပြန်ပေးသည်။ ထိုအခါ မိဖုရားကြီးက မင်းတုန်းမင်းအား "မောင်လွင်ရယ် ပြောပါရစေ၊ မင်းနဲ့ ကနောင်များ စစ်ပြိုင်ကြမယ်ဆိုရင် ကနောင်ဆိုတာလေ လက်ရုံးရည်၊ နှလုံးရည်နဲ့ သိပ်ပြည့်စုံတာ။ အဲလိုဆိုရင် မင်းမလွယ်ပေးဘူးနော်။ သွားမေးဦးမှပေါ့" [မှတ်စု 1]ဟုဆိုသောအခါမှ မင်းတုန်းမင်းက နောက်လိုက်များဖြင့် ကနောင်မင်းသားဆီသို့ သွားမေးခဲ့သည်။ ထိုသွားရောက်နေစဉ် ကနောင်မင်းသားနှင့် ဦးပုညတို့မှာ မြန်မာစစ်တုရင် ကစားနေလေသည်။ ဦးပုညက မင်းတုန်းမင်းကြီးကြွလာနေသည်ကို မြင်လျှင် ကနောင်မင်းသားအား ခပ်မြန်မြန် လူနာဟန်ဆောင်ခိုင်း၍ အိပ်ရာတွင်လှဲနေရန် အကြံပြုပြောဆို၏။ မင်းတုန်းမင်းရောက်၍ လူနာနံဘေးရောက်လျှင် ကနောင်အားစမ်းကြည့်၍ ကိုယ်ပူသည်၊ ဘေးနားမှ အစေများကို သူ့အားအကြောင်းမကြားရစကောင်းလားဟု ငေါက်ငန်းကာ သမားတော်ခေါ်ခိုင်းခြင်း၊ ခနုံထုပ်ကဲ့သို့ အားရှိစေသော အစာများလုပ်ခိုင်း စသဖြင့် စိတ်ပူတော်မူသည်။ ကနောင်မင်းမှ အိပ်ရာထက်က ကျိတ်၍ပြုံးတော်မူသည်။ ဘုရင်မင်းမြတ်ပြန်သွားသော် ဦးပုညအားခေါ်၍ သူသည် မင်းတုန်းမင်းအပေါ်အထင်မြင်မှားမိကြောင်း၊ နောင်တော်ဘုရင်မှာ သူထင်သကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲ သူ့အားချစ်မြတ်နိုးကြောင်း၊ နောင်တော်ကိုပြစ်မှားမိသည်မှာ အမှားတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းစသဖြင့် ပြောဆိုရင်း ကျေးဇူးရှင်ကို ပြစ်မှားမိသောသူက ကျေးဇူးရှင်ကို ပြန်လည်တောင်းပန်သည့် ဇာတ်ရှိ မရှိ မေးမြန်းသောအခါ ဦးပုံညက ဂင်္ဂါမာလဇာတ်တော်ရှိကြောင်းပြန်လည်ဖြေကြားလျှင် ညတွင်းချင်းရေးခိုင်းခဲ့သည်။ ဦးပုညမှလည်း ညတွင်းချင်းပင်ပြီးဆုံးအောင်ရေးသည်ဟု ဆိုကြသည်။
ရေသည်ပြဇာတ်သည် ကနောင်အိမ်ရှေ့မင်းနတ်ရွာစံပြီးနောက် မက္ခရာမင်းသားအားထီးနန်းပေးချင်သော်လည်း မက္ခရာမင်းသား၏ မယ်တော်မှာ အခြေမမြင့်သော မိဖုရားဖြစ်သဖြင့် အခြားသောမင်းသားများ၏ သဘောကိုစုံစမ်းရန်နှင့် အခြေနိမ့်သော ရေသည်ဘဝမှ အိမ်ရှေ့မင်းဘဝရောက်ခန်းပါသော ဂင်္ဂါမာလဇာတ်တော်ကို ဦးပုညအားတင်ဆက်စေ၍ ကပြစေတော်မူသည်ဟု မှော်ဘီဆရာသိန်းက မှတ်ချက်ပြုသည်။ ကနောင်မင်းသားနတ်ရွာစံပြီးမှ ရေးသောပြဇာတ်ဖြစ်သဖြင့် မှော်ဘီဆရာသိန်း သုံးသပ်ချက်အရ ဦးပုညသည် ထိုစဉ်က အသက်မသေသေးဘဲရှိသည်ဖြစ်၏။ [မှတ်စု 2]
ပိဋကတ်စာပေ၌လည်း ကျွမ်းကျင်သည်။ လောကီရေးရာ၌လည်းပြောင်မြောက်သည်။ ၎င်း၏ ပြန်ပေးမေတ္တာစာ၌ ရေးသားပုံအပိုင်းအစတစ်ခုတွင် :
စလေဆရာသည် အလွန်ဉာဏ်ထက်သန်သည်။ ရေသည်ပြဇာတ်ထက် စာအရေအတွက်များသော ပဒုမဇာတ်ကိုပင် ညတွင်းချင်း အပြီးရေးခဲ့သည်။ ရေသည်ပြဇာတ်၏ သုံးဆပမာဏရှိသော ဝိဇယပြဇာတ်ကို နှစ်ရက်အတွင်းရေးခဲ့သည်။ အမျိုးအစားမတူသော ကဗျာတို့ကိုရေးသားရာ၌ ဥပမာအားဖြင့် ဝန်စကား၊ မေတ္တာစာ၊ တေးထပ်၊ ရတု စသည့်လေးမျိုးကို တစ်ကြိမ်တည်းနှင့် ပထမတစ်ပိုဒ်ကို ဆက်တိုက်စီကုံးကာ နောက်ဒုတိယအပိုဒ်များကို ချက်ချင်းရေးဖွဲ့နိုင်စွမ်းရှိလေသည်။
ဗန်းမော်ဆရာတော်၏ တပည့်ပီပီ စကားလုံးကြွယ်ဝသည်။ ဟာသနေရာတွင် ဟာသဆန်၍ ကြမ်းတမ်းစွာဖွဲ့ဆိုရသောနေရာ၌ ဦးပုည၏ အတော်ပင်ကြမ်းတမ်းသော စကားများကို တွေ့ရသည်။ ဦးပုညအပေါ်လွှမ်းမိုးနိုင်သော ရှေးခေတ်စာဆိုတော်တစ်ဦးမှာ ရာမရကန်ရေးသူဦးတိုးပင်ဖြစ်သည်။ ဦးတိုး၏ အသုံးအနှုန်းကို များစွာယူဟန်ရှိသည်။ ဥပမာ ဦးတိုး၏ အုန်းတလုံး အသုံးချနည်း ကိုမူတည်ပြီး ဦးပုညက နွားတကောင်လုံး အသုံးချနည်း ကိုရေးသည်။ ဦးတိုး၏ စကားလုံးအသုံးအနှုန်းများဟန်များကို ဦးပုည၏ လက်ရာတစ်ချို့၌ အတုယူရေးထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
ထိုမိဖုရားကြီးသည် မင်းတုန်းမင်းထက်အသက်အရွယ်ကြီး၍ မင်းအပေါ်ဩဇာညောင်းသည်။ ထို့ကြောင့် မောင်လွင်ဟုခေါ်ဝေါ်သုံးနှုန်းသည်။
ဦးပုည သေခြင်း၊ မသေခြင်း၊ ဆုံးပါးသော သက္ကရာဇ်များမှာ မူအချို့ကွဲလွဲသည်။
Wisdomlibrary>Jataka 421: Gaṅgamāla-jātaka
Wisdomlibrary>Gangamala, aka: Gaṅgamāla; 1 Definition(s)
"ဂုဏ်ထူး ဦးသိန်းနိုင်-ရေသည်ပြဇာတ်(အပိုင်း(၂))" at YouTube
ဦးဖိုးကျား1946, p. 55.
ဦးဖိုးကျား1946, p. 56.
ဦးဖိုးကျား1946, p. 57.
ဦးဖိုးကျား1946, p. 58.
ဦးဖိုးကျား1946, p. 59.
"ဂုဏ်ထူး ဦးသိန်းနိုင်-ရေသည်ပြဇာတ်(အပိုင်း(၁))" at YouTube
ဦးဖိုးကျား 1946, p. 14.
ဦးပုည၏ ပြဇာတ်အတတ်ပညာ,ပါရဂူဘွဲအတွက်တင်သွင်းသောကျမ်း>အကျဉ်းချုပ်၊ နေလင်း(မဟာဝိဇ္ဇာ
ဦးဖိုးကျား 1946, p. 62,63.
ဦးဖိုးကျား 1946, p. 65,66.
ဦးဖိုးကျား 1946, p. 67.
ဦးဖိုးကျား 1946, p. 67-72.
ဦးဖိုးကျား 1946, p. 72-85.
ဦးဖိုးကျား 1946, p. 2,3.
ဦးဖိုးကျား 1946, p. 6.
ဦးဖိုးကျား 1946, p. 9,10.
ဦးဖိုးကျား 1946, p. 12,13.
ဦးဖိုးကျား 1946, p. 32.
ဦးဖိုးကျား 1946, p. 39.
ဦးဖိုးကျား 1946, p. 54.
ဦးဖိုးကျား 1946, p. 40-43.
Myanmar Dramatic Literature, its Rise and Decline by U Thaw Kaung
ဒဂုန်တက္ကသိုလ် သုတေသနဂျာနယ်၊ 2016 vol 7, No.1]
ဦးဖိုးကျား 1946, p. 62.
ဦးဖိုးကျား 1946, p. 67,68.
ဦးဖိုးကျား 1946, p. 70.
ဇင်မင်း(သမိန်ထော)-မြန်မာ့ပြဇာတ်ရေစီးနှင့် ရှေ့ခရီး၊ ၂၀၁၁၊ ပအကြိမ်၊ စာပေဗိမာန်
ဦးဖိုးကျား 1946, p. 60.
ဦးဖိုးကျား 1946, p. 59&60.